Tilmaamaha rakibida Manjaro Linux 2019 | Laga soo bilaabo Linux
Manjaro Linux ayaa hadda ah qaybinta ugu caansan Linux sida ku cad qiimeynta Distrowatch In kasta oo ay tahay wax ka soo jeeda Arch Linux, qaybintani waxay u sahlaysaa adeegsadaha inuu rakibo Arch Linux, maadaama qof kasta uusan ku dhiirran inuu rakibo Arch Linux saafi ah.
Waqtigan aan aragno sida loogu rakibo Manajaro Linux qaab fudud oo fudud Waana in la ogaadaa in boostadani loogu talagalay dadka cusub ee xiisaha u leh isku dayga Arch Linux.
1 Hel Manjaro Linux
2 Sida loo rakibo Manjaro Linux
Hel Manjaro Linux
Tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan sameyno waa soo dejinta Manjaro ISO, halkan waa inaad ogaataa inay jiraan dhowr nooc oo la heli karo, dhammaantoodna leh deegaanno kala duwan oo desktop ah, oo ay ku jiraan KDE, XFCE iyo GNOME marka lagu daro noocyada bulshada.
Waxaad kala soo bixi kartaa Manjaro Linux boggeeda rasmiga ah isku xirku waa kan.
Markaad go'aansato nooca aad rabto inaad isticmaasho, dhagsii xiriirka tooska ah ee soo dejinta.
Windows: Waxaan ku gubi karnaa iso Imgburn, UltraISO, Nero ama barnaamij kasta oo kale xitaa iyaga oo aan ku jirin Windows 7 markii dambena waxay na siineysaa ikhtiyaar aan ku saxno ISO.
Linux: Waxay isticmaali karaan gaar ahaan midka ku yimaada jawiga garaafka, iyaga waxaa ka mid ah, Brasero, k3b, iyo Xfburn.
Windows: Waxay isticmaali karaan Etcher, Universal USB Installer ama LinuxLive USB Creator, labaduba way fududahay in la isticmaalo.
Linux: Xulashada lagu taliyay waa in la isticmaalo amarka dd, kaas oo aan ku qeexeyno wadada aan ku heyno sawirka Manjaro iyo waliba barta aan ku leenahay USB-ga:
Ikhtiyaar kale waa Etcher maxaa yeelay waa iskutallaab.
Sida loo rakibo Manjaro Linux
Si loo bilaabo rakibidda Manjaro, Waxaan udhigi doonnaa qalabkeena udiyaar garowga ah ee aan hada ka diyaarinay kumbuyuutarkeena halkaasoo aan ku qaban doono rakibida isla markaana aan u sii wadayno inaan ku xirno nidaamka.
Kahor intaadan bilaabin rakibayaasha waxaad u baahan tahay inaad ku xirnaato internetka. Haddii aad isticmaaleyso xiriir Ethernet ah, waa inaad horeyba isugu xirneyd, laakiin haddii aad isticmaaleyso WIFI, dhagsii astaanta shabakadda ee ku taal geeska midig ee kore ee shaashadda oo dooro xulashada "xulashada shabakadda".
Guji shabakadda aad rabto inaad ku xirnaato ka dibna geli lambarka sirta ah haddii loo baahdo.
Si aad u bilowdo hawsha rakibida dhabta ah, Guji halka ay ku taal "Launch Instrumler" oo ah shaashadda soo dhaweynta.
Waxaad ka arki kartaa liistada dhinaca bidix ee shaashadda waana kuwan heerarka aad mari doontid si aad u rakibto Manjaro. Tallaabada ugu horreysa waa in la doorto luqadda rakibayaasha.
Talaabada labaad waxay kuu horseedaysaa inaad doorato goobtaada. Tani waxay qeexi doontaa aagaaga kumbuyuutarka saacaddiisa waxayna dejineysaa saacadda waqtiga saxda ah
Waxay sidoo kale dooran karaan luqadda nidaamkooda iyo aagagga lambarrada iyo taariikhaha.
Xaaladaha badankood, goobtaada iyo luqaddaada ayaa durba loo dejin doonaa qiyamka saxda ahHaa, laakiin haddii aadan badalin, dhagsii «Next».
Hadda waxaa lagu weydiin doonaa inaad doorato qaabka kumbuyuutarkaaga.
Ugu talagal, luuqada kumbuyuutarkaaga ayaa noqon doona midka ugufiican ee rakibayaha Manjaro ayaa go'aamisay inay sax tahay. Waxay ku tijaabin karaan naqshadeynta iyagoo ku qoraya sanduuqa la siiyay.
Haddii qaabeynta ay khaldan tahay, dooro luqadda qeybta bidix ka dibna qaabeynta saxda ah ee qeybta saxda ah.
Tallaabada xigta shaashadda qaybta ayaa laguu oggol yahay inaad doorato halka aad rabto inaad ku rakibto Manjaro.
Xulashooyinka waxaa ka mid ah "wada rakiba", "beddel xijaab", "masixi disk" ama "gacan-ku-hagitaan"
Hadday rabaan inay laba-geesood ku furaan Windows, waxay dooran karaan inay ku rakibaan ka dibna doortaan qaybta ay doonayaan inay yareeyaan si ay u rakibtaan Manjaro.
Haddii aad rabto inaad ku beddesho qaybta ku taal diskigaaga Manjaro, dooro ikhtiyaarka "Beddel qaybta" ka dibna dooro qaybta aad rabto inaad beddesho.
Si aad uga dhigto Manjaro nidaamka kaliya ee ku shaqeeya wadistaada, dhagsii ikhtiyaarka "masixi disk" oo guji "Next".
Hadda waxaad u baahan tahay inaad abuurto isticmaale asalka ah. Tallaabada xigta waxay u baahan doonaan inay soo galaan magacooda, magaca iyo magaca kombiyuutarkooda.
Kadib Waxaad u baahan doontaa inaad ku wareejiso lambarka sirta ah ee aad rabto inaad u isticmaasho adeegsadahaas iyo lambarka sirta ah ee xaqiijinta.
Marka lagu daro lambarka sirta ah ee isticmaalaha, waxay ku geli karaan lambar sir ah oo ka duwan maamulka oo ay xaqiijinayaan.
Si kastaba ha ahaatee, Haddii aad dooneysid in lambarka sirta ee maamulku la mid noqdo lambarka sirta isticmaalaha, guji "u isticmaal isla eray isku mid ah koontada maamulka".
Adiga oo gujinaya "rakib", waxaa lagu siinayaa fursadii ugu dambeysay ee aad ku soo laaban lahayd. Haddii aad hubto inaad rabto inaad sii wado, dhagsii "Ku rakib Hada".
Dhamaadka rakibida, si fudud uga saar warbaahinta rakibaadda oo dib u bilow kumbuyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Tilmaamaha Rakibaadda Manjaro Linux 2019
Ku rakib manjaro 19.1 xigta mint 19.3, oo leh uefi-ka 2 oo si aad ah ayey u shaqeeyaan. Manjaro wuxuu leeyahay xulashooyin ka badan reexaanta taasna waa inay ka badbaado sida kuwa yaqaan ay dhahaan. Wax yar ayey igu kacday in aan dhaqaajiyo bluetooth-ga laakiin waa x marinka midba midka kale waxba ma, waa distoor aad u wanaagsan sida ay yiraahdaan illaa iyo hadda dhib malahan marwalba waxaan ku isticmaalaa reexaanta buugan iyo qadhaadh kan Asus netbook in aan haysto laakiin hadda gacantii horeba Way ku culus tahay shabaqa maxaa yeelay waa mashiin 10 jir ah. 2-da distoor ee aan soo sheegay intaanan u isticmaalin lenovo 50-80 waxayna aad ugula socdaan jiilka 3aad i5 iyo 16gb wan. Waxaan cadeeynayaa ku dar 240 gb ssd halka aan ku rakibo distros-ka, ka saar aqristaha meeshiisiina waxaan dhigay 1 tera hdd oo keenay buugga iyo kan dambe waxaan u isticmaalaa guriga hoteellada waxaana ka tagayaa ssd si aan u rakibo waxa kale oo furan , salaan
Ku jawaab kino